Vivo Nex2ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည် Androidsis
Vivo သည်စတင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည် Vivo NEX 2သင်၏အောင်မြင်မှုရမည့်မိုဘိုင်း လက်ရှိအထင်ကရ။ ၎င်းကိုရှေ့နှစ်ကင်မရာဖြင့်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယခင်ကတရုတ်ကုမ္ပဏီသည် Vivo Nex2စမတ်ဖုန်းကိုဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်စတင်နိုင်သည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့သည်။ အခုတော့ကုမ္ပဏီနောက်ဆုံးတော့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ဖုန်းကိုဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်တရုတ်၌စတင်ရောင်းချမည်.
Vivo Nex2တွင်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါရှိသည်။ နောက်ဘက်ကင်မရာတပ်ဆင်မှုသည်နောက်ကင်မရာနောက်ဘက်ထားရှိသည့်ဒုတိယမျက်နှာပြင်၏ကျေးဇူးကြောင့်ရှေ့ကင်မရာအမြင့်သည်ရှေ့ကင်မရာကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အနိမ့်အမြင့်ရှေ့ကင်မရာကိုလွဲချော်လိမ့်မည်။
သို့သော်သတိရပါ၊ Vivo သည် display နှစ်မျိုးပါ ၀ င်သောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းပြုလုပ်သူမဟုတ်ကြောင်းနှင့်နောက်ကင်မရာ setup သည်ရှေ့ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာများကဲ့သို့နှစ်ဆဖြစ်လာမည် ZTE ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ Nubia X ဒီဒီဇိုင်းနှင့်အတူ.
စမတ်ဖုန်း၏အရှေ့ဘက်တွင်ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာမရှိခြင်းကြောင့် ဖုန်းတွင်မျက်နှာပြင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုဝန်းရံထားသည့်အလွန်ပါးလွှာသော bezel များပါရှိသည်။ နောက်ဘက်မှာတော့အလယ်တန်းမျက်နှာပြင်အောက်မှာ Vivo တံဆိပ်တံဆိပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းဖုန်းသည် Qualcomm ၏အထင်ကရ octa-core Snapdragon 845 chipset ဖြင့်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး 10GB RAM နှင့် 128GB RAM အထိသိုလှောင်ထားနိုင်ကြောင်းထောက်ခံချက်များရရှိခဲ့သည်။ ။ ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်မှာ ၆.၅၉ လက်မ၊ နောက်ဘက်က ၅.၅ လက်မဖြစ်နိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ၎င်းတွင် In-display fingerprint sensor ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံးမျက်နှာပြင် dual-screen smartphone fingerprint scanner ကိုပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » တရားဝင်: Vivo Nex2ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်